Ch 11 मत्ती – 2माछा
घर / बाइबल / मत्ती को सुसमाचार / Ch 11 मत्ती
11:1 र यो पनि त्यस्तै भयो, येशूले आफ्ना बाह्र चेलाहरूलाई सिकाउनु पूरा गरेको थियो जब, उहाँले त्यहाँ बाट सिकाउन र आफ्नो शहर प्रचार गर्न टाढा गए.
11:2 Now when John had heard, in prison, about the works of Christ, sending two of his disciples, उहाँले तिनलाई भन्नुभयो,
11:3 "तपाईं त्यो जो आउन छ हुनुहुन्छ, or should we expect another?"
11:4 अनि येशूले, प्रतिक्रिया, तिनीहरूलाई भन्नुभयो: "जाओ र तपाईं सुने र देखेको के यूहन्ना गर्न रिपोर्ट.
11:5 The blind see, लङ्गडाको पैदल, यो कुष्ठरोगियहरुको शुद्ध छन्, बहिरालाई सुन्ने, मरेका वृद्धि फेरि, गरिब evangelized छन्.
11:7 त्यसपछि, after they departed, Jesus began to speak to the crowds about John: “What did you go out to the desert to see? A reed shaken by the wind?
11:8 So what did you go out to see? A man in soft garments? हेर, those who are clothed in soft garments are in the houses of kings.
11:9 Then what did you go out to see? A prophet? हो, म तपाईंलाई बताउन, and more thanaprophet.
11:10 For this is he, of whom it is written: 'हेर, म आफ्नो अनुहार अघि मेरो स्वर्गदूत पठाउन, who shall prepare your way before you.’
11:11 Amen म तिमीहरूलाई भन्दछु, महिला जन्मिएको गर्नेहरूमध्ये, त्यहाँ यूहन्ना बप्तिस्मा दिने भन्दा कुनै एक ठूलो खडा भएको छ. अहिलेसम्म स्वर्गको राज्यमा कम से कम त्यो भन्दा ठूलो छ.
11:12 तर यूहन्नाले बप्तिस्मा दिन देखि, पनि अहिले सम्म, स्वर्गको राज्य हिंसा सहेका छ, र हिंसात्मक यसलाई दूर ले.
11:13 व्यवस्था भविष्यवाणी सबै अगमवक्ताहरू र, पनि जन सम्म.
11:14 र तपाईंले यसलाई स्वीकार गर्न तयार छन् भने, उहाँले एलियालाई छ, जो आउन छ.
11:15 जसले सुन्न कान छ, उहाँलाई सुन्न गरौं.
11:16 तर म यो पुस्ता के तुलना हुनेछ गर्न? यो बजार मा बसिरहेका छोराछोरीलाई जस्तै छ,
11:17 जो, आफ्नो साथीहरू पुकारेर, भन्न: 'हामी तपाईं को लागि बाजा बजाएको, र तपाईं नाच गरेनन्. हामी दुःख पोखे, र तपाईं शोक गरे। '
11:18 यूहन्ना लागि न खाने न पिउने आए; र तिनीहरूले भन्न, 'उहाँले एक राक्षस छ।'
11:19 मानिसको पुत्र खाने र पिउने आए; र तिनीहरूले भन्न, 'हेर, voraciously eats र जो रक्सी पेय मानिसलाई, कर उठाउनेहरू र पापीहरू। 'तर बुद्धि एक मित्र उनको छोरा द्वारा जायज छ। "
11:20 त्यसपछि उहाँले आफ्नो चमत्कार धेरै पूरा थिए जसमा शहर हप्काउनुभयो गर्न थाले, तिनीहरूले अझै पनि पश्चात्ताप थिएन.
11:21 "धिक्कार, Chorazin! तपाईं धिक्कार, बेथसेदा! यदि तपाईंलाई गरेका थिए कि चमत्कार टायर र Sidon मा गरिएको थियो लागि, तिनीहरूले haircloth र खरानी मा लामो पहिले पश्चात्ताप थियो.
11:22 यद्यपि साँच्चै, म तपाईंलाई भन्न, टायर र Sidon तपाईं भन्दा क्षमा गरिनेछ, न्याय दिन.
11:23 तपाईं र, कफर्नहुम, तपाईं स्वर्ग सबै तरिका उच्च हुनेछ? तपाईं नरक सबै तरिका धमकना हुनेछ. यदि तपाईंलाई गरेका थिए कि चमत्कार सदोम मा गरिएको थियो लागि, सायद यो रहेका थियो, यस दिन गर्न.
11:24 यद्यपि साँच्चै, म तपाईंलाई भन्न, कि सदोम भूमि तपाईं भन्दा क्षमा गरिनेछ, न्याय दिन। "
11:25 त्यो समयमा, येशूले जवाफ र भन्नुभयो: "म तपाईंलाई स्वीकार, पिता, आकाश र पृथ्वी प्रभु, तपाईं बुद्धिमानी र बुद्धिमानी देखि यी कुराहरू लुकेका छन् किनभने, र साना तिनीहरूलाई प्रकट गरेका छन्.
11:26 हो, पिता, यो लागि अघि खुसी.
11:27 सबै कुराहरू मेरा पिताले मलाई गर्न वितरित गरिएको छ. र कुनै एक पिताले बाहेक पुत्र थाह, न त कसैले छोरा बाहेक पितालाई थाह छ, र उसलाई प्रकट गर्न पुत्र इच्छुक छ जसलाई ती.
11:28 मलाई आउनुहोस्, सबै तपाईं श्रम र बोझ छन् जो, र म तपाईंलाई ताजा हुनेछ.
11:29 तपाईं मेरो जुवा बोक, र मलाई सिक्न, म नम्र र हृदयको नम्र हुँ; र तपाईं बाँकी आफ्नो प्राण लागि पाउन पर्छ.
11:30 मेरो जुवा बोक्न लागि मीठो छ र मेरो बोझ हल्का छ। "